NMA को पहलमा चिकित्सकको शुल्क वृद्धि - Everest Dainik - News from Nepal
NMA को पहलमा चिकित्सकको शुल्क वृद्धि
नेपाल चिकित्सक संघको पहलमा चिकित्सकहरुको तलब वृद्धि हुने भएको छ। सरकारलाई शुल्क पुनरावलोकनको सिफारिस गर्नका लागि बिहिवार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक संघ( एनएमएको ) उपस्थितिमा पुनारावलोकन सिफारिस कार्यदलको बैठक बसेको हो।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री डा. उपेन्द्र देवकोटाले चिकित्सकको शुल्क निर्धारणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएका थिए । तर, सो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। शुल्क परिमार्जन नहुँदा चिकित्सक मर्कामा पर्न थालेपछि NMA ले पटक पटक पुनरावलोकनको माग गर्दै आएको थियो। NMA को व्यापक पहलपछि हालको लागी चिकित्सकहरुको ओपिडि शुल्क बढ्ने भएको हो। नेपाल मेडिकल काउन्सीलमा दर्ता भइ लाइसेन्स प्राप्त एम.बी.बी.एस/ बी.डी.एस, एम.डी /एम.एस्/एम.डि.एस, डि.एम/फेलोसिप गरेका सम्पुर्ण चिकित्सकहरुको शुल्क वृद्धि हुन लागेको हो। साथै पाँच वर्षे अनुभाव पुरा गरेकाहरुको हकमा थप शुल्क हुनेछ।
साथै चिकित्सकको बेसिक सेलरी वृद्धिको लागी पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयसंग समन्वय भइरहेको नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले जनाउनुभयो। चिकित्सकको हकहित र सुरक्षामा नेपाल चिकित्सक संघ प्रतिबद्ध रहेको जनाउदै “जेल विद आउट बेल” लागू गर्ने मागलाई क्याबिनेटमा पुर्याइएको जानकारी दिनुभयो। “नेपाल चिकित्सक संघ चिकित्सकको हक हितको लागी संघर्ष गरेर मुलुकी एेन समेत संशोधान गराउन सफल पहिलो संस्था हो।” , उहाँले भन्नुभयो।